ILönnebergaleden | Vakashela uHultsfred
umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » ULönnebergaleden
Lo mzila unqamula ingxenye engenhla kamasipala waseHultsfred futhi uxhuma i-Ostkustleden neSevedeleden. ILönnebergaleden ingeyenethiwekhi yaseSweden yemizila yasethafeni ngakho-ke ibhalwe ngo-orange. Lokhu kunyuka kuhluka kakhulu ngeziqongo ezincane, ukubukwa okuhle namahlathi omlingo ajulile. Uhamba emigwaqweni yakudala yesonto, udlula amapaki endawo kanye nezinye izikhumbuzo. Umzila wokuhamba izintaba udlula endaweni yezolimo ephilayo, unqamula emahlathini nasemachibini adlule.
Umzila uvame ukuhamba kalula, futhi uma ufuna ukuchitha ubusuku ngomkhondo, kunezindlela ezimbalwa
i-windbreak ebangeni elifanele kodwa namahostela namahhotela.
Sihlukanise leli banga laba ngamahlanu
izigaba ezahlukahlukene + amabanga ama-2 angeziwe.
Emzileni kukhona izindlu zangasese ezomile nezinye izikhala zamanzi.
Kokunye ukunweba kungadingeka udlule esikebheni semfuyo.
ILönnebergaleden eHiking Project
Lönnebergaleden kumephu yemvelo
Igelhult 4, 570 91 IKristdala, Sweden